အင်တာဗျူး - CAROLINE CALLOWAY သည် THE PITT CLUB MAY BALLS နှင့်ဆွေးနွေးခြင်း၊ သူ (ယခု) TAB စာဖတ်သူများကိုဘာကြောင့်ချစ်ရတာလဲ - CAMBRIDGE တက္ကသိုလ် - သတင်း
တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း။ Caroline Calloway သည် May Balls၊ The Pitt Club အကြောင်းပြောဆိုသည်။ သူ (ယခု) Tab စာဖတ်သူများကိုဘာကြောင့်ချစ်ရတာလဲ
ကင်းဘရစ် grad မှ Caroline Calloway, Instagram လွှမ်းမိုးမှု နှင့်မိမိကိုယ်ကိုဖော်ပြသည့်မှတ်တမ်းစာအုပ်သည်နာမည်ကျော်ကြားသူများကိုသတ်မှတ်ရန်ခက်ခဲသောအင်တာနက်အကျော်အမော်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ဒါဟာသူမကစိမ်းရောင်စုံအကြောင်းအရာသူမ၏အဆုံးမဲ့စီးထံမှကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သကဲ့သို့ငါသူမအကြောင်းကိုရေးသားသင့်သည်အဘယ်ကြောင့်အတိအကျနေရာချထားရန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ သူမသည်သူမ၏ရှည်လျားသော Instagram စာတန်းများအဘယ်သူ၏ဖောက်သည် Donald Trump ပါဝင်သည်စာပေအေးဂျင့် Bryd Levell, နှင့်အတူစာချုပ်ဆင်းသက်နှင့်အတူကင်းဘရစ်ဘွဲ့ကြိုအဖြစ်ထင်ရှားကျော်ကြားဖို့ထ။ ဒေါ်လာ ၅၀၀,၀၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိစာအုပ်ရောင်းဝယ်မှုတစ်ခုရရှိပြီးမှသာဤအရောင်တောက်တောက်လှပသောမျက်နှာစာသည်ကယ်ရိုလိုင်းသည် Adderall ကိုအလွန်စွဲလမ်းနေပြီးစာအုပ်ကိုမရေးနိုင်တော့သဖြင့်စာချုပ်သည်ပြိုကွဲသွားသည်။
ဇန်နဝါရီလ 2019 ခုနှစ်တွင် သူမ၏အမည်ပြန်ပေါ်ထွက်လာ ညံ့ဖျင်းစွာဖွဲ့စည်းထားသောတီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများမှတဆင့်လိမ်လည်သူဟုတံဆိပ်ကပ်ထားသည်။ ထိုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်ဖြစ်သည် The Cut သူမ၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဟောင်း Natalie သဲသောင်ပြင်မှရေးသားခဲ့သည် ငါကယ်ရိုလိုင်း Calloway ဖြစ်ခဲ့သည် Calloway သည် Instagram နောက်လိုက်များအားမည်သို့ ၀ ယ်သည်၊ Natalie ကိုစာအုပ်အဆိုပြုလွှာရေးသူအဖြစ်အလုပ်ခန့်ခဲ့ပြီးသူမသူငယ်ချင်းအားညံ့ဖျင်းစွာဆက်ဆံခဲ့ပုံကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဆောင်းပါး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုမှာကာရိုလင်းအားဒီဂရီအမျိုးမျိုးဖြင့်ပုံဖော်ခဲ့ပြီး၊ လူရွှင်တော် နှင့် ချစ်သူ သို့မဟုတ်သူမ၏ဇာတ်လမ်းကိုပြည်နယ်အပေါ်ကြီးမားသော၊ ယဉ်ကျေးမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုး , အဖြူအမျိုးသမီးအခွင့်ထူး နှင့်ပင် အနုပညာကိုယ်တိုင် ။
Calloway သည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီးမကြာသေးမီကသူမအားအရှုပ်တော်ပုံနှင့်ဝေးဝေးနေနိုင်ခြင်းမရှိဟုထင်ရသည် တွစ်တာတွင် antisemitic ကာတွန်းတင်ခြင်း တစ် ဦး အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ဒေါသ, ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် တောင်းပန်လျှင်မြန်စွာ သူမကာတွန်းရဲ့ပြmessနာ messaging သတိမထားမိခဲ့ကြောင်းပြောဆိုထားသည်သူကိုကယ်ရိုလိုင်းကနေ။
ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာကယ်ရိုလိုင်းရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တုန်းကအရှုပ်တော်ပုံတွေ၊ စကားပြောဆိုမှုအလွှာတွေနဲ့အလွှာတွေကိုကျွန်တော်သတိမပြုမိခင်မှာသူမရဲ့အထွေထွေရှုပ်ထွေးလှတဲ့အလွယ်တကူအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့လှပတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့လစ်ဘရယ် Instagram လွှမ်းမိုးမှုရှိပုံရပါတယ်။ ဖတ်တယ် ? အိုဘုရားသခင်၊ ဟုတ်ကဲ့
သူမသည်ကျွန်ုပ်တက်ရောက်လိုသောတက္ကသိုလ်ကိုဖြစ်နိုင်ချေနှင့်ပြည့်နှက်နေသော၊ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူမသည်မင်းများနှင့်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်များ၊ မင်းသားများနှင့်ပိုလိုကစားသမားများနှင့်ပြည့်နေသောကိန်းဘရစ်ကိုပုံဖော်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏နှုတ်ထဲတွင်အမြဲအရသာဆိုးဆိုးစွဲစေခဲ့သည်၊ အထူးသဖြင့်ကိန်းဘရစ်၌ငါတွေ့ခဲ့ဖူးသောဤသူအားလုံးသည် အကောင်းဆုံးမှာ ပြော၍ မရ၊
ကာရိုလိုင်းကိုသူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုခံစားရလဲလို့ငါမေးတဲ့အခါကင်းဘရစ်ဘ ၀ ၏အမြင့်ဆုံးထင်ပေါ်ကျော်ကြားပြီးရှေးရိုးစွဲအစဉ်အလာများဖြစ်သည့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Pitt Club ကဲ့သို့သူမ၏တုန့်ပြန်မှုမှာနှေးကွေးပြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။ ငါအမျိုးသမီးရေးရာအကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်လူမျိုးရေးဆန့်ကျင်အကြောင်းအရာများတင်ခဲ့သည်ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာ, ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကိုယ်ဝန်ဖျက်ချကိုအထောက်အပံ့ကနေရာသီဥတုအသိအမြင်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းမှတစုံတခုကိုရေတွက်လျှင်, သင် Pitt ကလပ်ဖော်ပြခဲ့ဖူးသမျှသောကာလပတ်လုံးရေတွက်လျှင် ၎င်းသည် Pitt Club ၏ဖော်ပြချက်ငါးခုနှင့်တူသည်။
သူမသည်မီဒီယာတွင်သူမအပေါ်ထားရှိသောဤထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောထင်မြင်ချက်ကိုပြက်ရယ်ပြုသည်။ တော်ဝင်မိသားစုနဲ့ပေါင်းချင်ရင်၊ OnlyFans စာမျက်နှာကိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
မျှဝေသည် ကယ်ရိုလိုင်း Calloway (@carolinecalloway) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက်၊
သူမသည်ဗြိတိန်လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း၏ရုပ်ပုံကိုအမြင့်ဆုံးရှုပ်ထွေးမှု၏အမြင့်ဆုံးအဖြစ်ကန့်သတ်လိုသောစိတ်နှင့် ပတ်သက်၍ သူမစိတ်မပျက်ဖြစ်နေသည်။ ငါအောင်မြင်သောကြောင့်ငါကိန်းဘရစ်အကြောင်းပြောနေတာအောင်မြင်သောကြောင့် လူများ အဲဒီကိန်းဘရစ်ခ်ျအကြောင်းရေးဖို့ကျွန်တော့်ကိုဒီဖိအားပေးခဲ့တယ် သူတို့ မြင်ချင်တယ် ဒါကအနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ငါ့ရဲ့ပြfuckနာမဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေငါ့ကိုလား ငါကလူငါ့ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်
ကယ်ရိုလိုင်းသည်သူမဖန်တီးထားသည့်အရာအားလုံးကိုသီးသန့်ခံစားရရန်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်ကြီးစိုးမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်သူမလိုချင်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရန်မြန်သည်။ ငါပဲအင်္ဂလန်ကိုသွားသူကိုအောက်စ်ဖို့ကိုသာမြင်သူတစ် ဦး အမေရိကန်ဇာတ်ကြောင်းပြောအတွက်ဟာသအများကြီးရှိပါတယ်ထင်! ဒါကငါလုပ်ချင်အနုပညာပါပဲ။ ငါနှင့်အတူကင်းဘရစ်ထပ်ဖွကြိုးစားနေတဲ့ National Geographic သတင်းထောက်မဟုတ်ပါဘူး ရည်ရွယ်ချက်တိကျတဲ့။ စာအုပ်၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာအကြောင်းအရာများကိုအများဆုံးဖြစ်စေရန်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
လူတစ် ဦး အနေဖြင့် Calloway သည်သူမ၏ Instagram ရှိခြင်းနှင့် ပို၍ ကွဲပြားသည်၊ ပို၍ နူးညံ့။ ပို၍ စဉ်း စား၍ ပွင့်လင်းသည်။ သူမကိုယ်သူမကိုလှောင်ပြောင်လိုသောစိတ်ဆန္ဒအားဖြင့်ကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်မိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံသူမ Instagram တွင်ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း၊ သူမနှင့်သူမ၏အခွအေနသည်အခြားလူတိုင်းကဲ့သို့ရယ်စရာကောင်းသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရပြီးသူမ၏ဖန်တီးမှုဖြစ်စဉ်ကိုမေးမြန်းသောအခါသူမကိုယ်တိုင်လှောင်ပြောင်ခံရသည်။ ဦး စွာကင်းဘရစ်ခ်ျကိုလျှောက်ထားပါ၊ ငြင်းပယ်ပါ။ ထို့နောက်ကင်းဘရစ်လျှောက်ထားပါ၊ ထပ်မံငြင်းပယ်ခံရပါ။ တတိယအကြိမ်လျှောက်ထားပါ၊ ၀ င်ပါ၊ တတိယတန်းကျောင်းသားများအတွက်ရည်ရွယ်သည့်ဆေးညွှန်းအမ်ဖီတမင်းဆေးများကိုချက်ချင်းစွဲသွားပါ။ သုံးနှစ်နေပါစေ Instagram မှာအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းသည်သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသင့်ကိုကျေနပ်အားရစေလိမ့်မည်။ ပြီးတော့နိုးထပြီးအဲဒီကနေအနုပညာကိုစတင်လုပ်ပါ၊ ငါ့ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ပါ။ wow, ဒီအင်တာဗျူးအမှန်တကယ်ငါ့ကို $ 165 ကုန်ကျခြင်းနှင့်မျက်မှောက်၌အဘယ်သူမျှမပန်းပွင့်သရဖူရှိပါတယ်ရှိပါတယ်မှလွဲ။ အမှန်တကယ် Calloway ရဲ့ဖန်တီးမှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများထဲမှကဲ့သို့ခံစားရရန်စတင်နေသည်။
ကိုယ့်မတော်တဆကြောင့်မတူပဲထို့နောက် instagram ပေါ်ဓာတ်ပုံကြိုက်တယ်
ကယ်ရိုလိုင်း၏ယခင် Cambridge Tab အင်တာဗျူးများအကြောင်းသူမကကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်စဉ်ကပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်သည်ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာပေးသောပထမ ဦး ဆုံးပြုလုပ်သောအင်တာဗျူးဖြစ်သည်ဟုသူမကပြောပြသည်။
ပထမအင်တာဗျူးနှစ်ခုအတွင်းသူမဆက်လက်ပြောကြားသည်။ အကယ်၍ သင်အင်တာဗျူးများကိုအမှန်တကယ်ဖတ်ပါကသူသည်ဤအချိန်ကာလ၏အနည်းဆုံးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသတင်းကိုတွေ့လိမ့်မည် (သူမ၏အရူးမျက်လုံးများကိုအင်တာဗျူးသူ၏ထပ်ခါတလဲလဲညွှန်းဆိုမှုများသည်အထူးသဖြင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသည်) ကိုသူမဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ငါသူမသူတို့အားအင်တာဗျူးများကတည်းကပြောင်းလဲသွားတယ်ရဲ့ဘယ်လိုမေးပါ။ သငျသညျဒါ fuck ဆိုတဲ့ရယ်စရာဘာလဲသိ? နှစ်ခါဖျက်သိမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်ငါ The Tab ဟာငါနဲ့တူတယ်! ငါအင်တာဗျူးတွေကိုငါနုပျိုစဉ်ကမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါတဲ့ '' အဆိုပါ Tab ကို fuck ဆိုတဲ့ '' သဘောထားကိုအနည်းငယ်နှင့်အတူသူတို့အားအင်တာဗျူးများသို့သွားပြီချင်ပါတယ်။ လူတွေထင်တာကိုပဲဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။
သူမသည်အတွက်သူမ၏အခိုင်အမာမှာရယ်မော အချိန်ကနေဒီဆောင်းပါး The Tab comment အပိုင်းသည်အစဉ်အဆက်ဆိုးရွားသောနေရာဖြစ်သည်။ ငါမသိတာဘာမှမသိဘူး၊ Tab ဖတ်သူများ - တကယ့်ဖြစ်ရပ်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါမှားသွားတယ်။ ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အရာပဲ။
စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ, ကယ်ရိုလိုင်း Eddies မှာကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့် (ငါဘယ်တော့မှငါမသွားဖူးကြောင်းသူမ၏ပြောပြသောအခါသူမကငါမသွားပိုကောင်းတယ်ငါ့ကိုပြောပြသည်သော်လည်း) သူမကသူမ၏ဒုတိယနှစ်ကာလအတွင်းဒေါင်းနင်းတှငျနထေိုငျနှင့် King ရဲ့တတိယကာလအတွင်း။ သူမသည်ဤဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်အပေါ်ယံအကြောင်းပြချက်နှင့်ပတ်သက်။ ရိုးသားသည်။ ငါတကယ် fuck ဆိုတဲ့ကိန်းဘရစ်ရဲ့လှပတဲ့နေရာမှာနေချင်ခဲ့တယ်၊ ငါဟာလှပတဲ့ကောလိပ်မှာနေချင်ခဲ့တယ်၊ နွေရာသီမှာလှပတဲ့ကောလိပ်တိုင်းကိုငါခေါ်ခဲ့ပုံကိုလှောင်ပြောင်ခဲ့သည်။ 'မင်းမှာနေရာလွတ်တွေရှိလား။ အိမ်ရာနေရာလွတ်များရှိပါသလား။ ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ဖုန်းပြန်ခေါ်တော့မယ်။
ကယ်ရိုလိုင်းသည်ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးသည်စတုတ္ထမဏ္sevenိုင်ခုနစ်ပါးအကြောင်းပြောဆိုခြင်းနှင့်အတူမေလဘောလုံးအကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ စင်ကြယ်သောဗေဒရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်လူတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအချို့သောအရာများကိုဆွဲဆောင်နိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ Gauguin သည်တဟီတီကိုအဘယ်ကြောင့်ကြိုက်ခဲ့သနည်း၊ နှင့်မွန်သည် Giverny ၏ဥယျာဉ်များကိုအဘယ်ကြောင့်ကြိုက်သနည်း။ ငါကိန်းဘရစ်၌ထငါ, ငါ O'Oh ဤဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကဗေဒဖြစ်ပါတယ် ငါနှလုံးကိုမီးရှို့တော်မူ၏ May May နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမိခြင်းသည်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းလှသည်။ သို့သော်အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်မင်းသမီးများသည်အဖိုးမတန်အဖြူရောင်လည်စည်းတွင်တစ်ခုခုရှိကြသည်။ သူတို့ DMs များကိုသူတို့၏ဖုန်းပေါ်၌သူတို့စစ်ထုတ်ထားသောအအေးခံပုလင်းကိုထုတ်ယူစဉ်တွင်တွေ့ရသည်။ ရေခဲတွေပြည့်နှက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကနေအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ကင်းဘရစ်ကိုအနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဆွဲဆောင်သလိုခံစားရတယ်၊ ငါဟာဒီကမ္ဘာကြီးကိုငါ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေအားလုံးကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ပဲခေါ်တာပါပဲ။
အဆိုပါ Kardashian ၏အသက်အရွယ်ဘာတွေလုပ်နေလဲ
Calloway ၏အမြင်တွင်, ဤလောက၏သူမ၏စကားရပ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Zoom မှတဆင့်ဤဝေါဟာရကိုနောက်မှ Zoom မှတဆင့်ပြည်ထောင်စုမှာစကားပြောရန်သူမ၏မကြာသေးမီကဖိတ်ကြားချက်အားဖြင့်တရားဝင်အောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ။ကျွန်ုပ်၏ Instagram ကိုလုပ်နေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏ Instagram ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့သောကျွန်ုပ်၏အတန်းထဲတွင်များစွာသောလူတို့သည်ကျွန်ုပ်သည်ပြည်ထောင်စု၌စကားပြောရန်တောင်းဆိုခြင်းခံရသည့်ကျွန်ုပ်၏ဘွဲ့ရလူတန်းစားမှပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းအံ့အားသင့်မိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပြည်ထောင်စု hack အဆက်အသွယ် / ကောလိပ်ခင်ပွန်းဖြစ်သူအားဤပြောဆိုချက်ကိုအတည်ပြုရန်ကျွန်ုပ်တောင်းဆိုသောအခါသူက၎င်းသည်မျှတသောထင်မြင်ချက်ဖြစ်ကြောင်းအထောက်အကူပြုပြန်သည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတကလည်းလုံးဝမသေချာသော်လည်း၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်သည်။
covid ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ရရှိသောဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ ရရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့နီးကပ်စွာလုပ်ဆောင်နေစဉ် @thecut မှ @stellabugbee အားကျွန်ုပ်အားဤမယုံနိုင်လောက်အောင်အခွင့်အရေးပေးသည့်အတွက်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နယူးယောက်၌အွန်လိုင်းစာအမှတ်အသားတစ်ခုသည် @nymag မှပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်ရုံသာမကအခြားတစ်ဖက်တွင်ပိုမိုအားကောင်းလာစေနိုင်သည့်နယူးယောက်၌စာရေးဆရာ ၂ ဝခန့်ရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသည်ဟုခံစားမိပြီး Stella ကသူ၏မကောင်းသောအယ်ဒီတာ့အာဘော်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သော Gawker ကဲ့သို့သောအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကို - ဘုံကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေသောအရာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအခွင့်အရေးပေးခဲ့သည်။ ငါအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Stella, tysm !!!!!!!!!! 🧚♂️
မျှဝေသည် ကယ်ရိုလိုင်း Calloway (@carolinecalloway) 2020ပြီလ ၁၇ ရက်၊ ၂၀ ရက်၊ ညနေ ၃း၁၀ နာရီတွင် PDT တွင်
Caroline Calloway နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၏ရိုးရာအစဉ်အလာတွင် Natalie ၏ဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်၍ သူမသည်လက်ရှိရေးသားထားသည့်အပိုင်းသုံးပိုင်းတွင်တုံ့ပြန်နေသောဆောင်းပါးအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်မေးရပါမည်။ ငါကယ်ရိုလိုင်း Calloway Am အင်တာဗျူး၏ထိုအချိန်ကသူမကနောက်ဆုံးအပိုင်းကိုမပြီးဆုံးသေးပါ၊ ကျွန်ုပ်နှင့်ချိတ်ဆက်လိုက်သည်နှင့်သူမအလုပ်လုပ်ကိုင်တော့မည်ကိုပြောခဲ့သည်။ နောက် ၇ လအကြာတွင်သူမတုန့်ပြန်ရန်လိုအပ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ခံစားရဆဲလဲဟုသူမမေးသည်။ သူမအဖြေကိုကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားပြီးဖြတ်တောက်ခြင်းကိုသူမအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ သငျသညျမှတ်မိလျှင်, ငါ့အဖေကထွက်လာသည့်ရက်သတ္တပတ်နာကျင်စေသောဆေးများအပေါ်အလွန်အကျွံသုံးစွဲ, ဒါကြောင့်ငါကဘာလို့လဲဆိုတော့ငါရှိရာသို့အလျင်အမြန်တုန့်ပြန်မပြုခဲ့အဘယ်ကြောင့်လူတွေကငါ့ကိုမေးတဲ့အခါဒါဟာတကယ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ထင်ပါတယ်။ သင်၏ဘ ၀ ပုံစံကိုကြည့်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့တွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်၊ သင့်ကိုသေစေပြီးသင်၏ဖခင်ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့သည့်အရာသည်အငွေ့ပျံသွားသည်။
သူမဟာမကြာခဏပြောသလိုနာတာလီကိုသူချစ်နေဆဲလား၊ ဒေါသဖြစ်နေတာလားဆိုပြီးသူမမေးသည်။ သူမသည်တုံ့ပြန်ရန်နှေးကွေးသည်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်း…သည်းခံနိုင်စွမ်းတော့မရှိဘူး၊ မင်းသိတဲ့အတိုင်းငါနေ့တိုင်းတွေ့ကြုံခံစားရတယ်။ ၎င်းသည် linear မဟုတ်ပါ၊
သူမဟာ Natalie အပေါ်ထားရှိသည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဒေါသနှစ်မျိုးစလုံးကိုကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်ကွဲပြားခြားနားသောဒီဂရီများအထိခံစားရသည်ဟုပြောပြသည်။ သူမအဖေအကြောင်းမည်မျှသိသည်ကိုအသေးစိတ်မပြောရန်ကျွန်ုပ်အလွန်သတိထားခဲ့သည်၊ အကြောင်းမှာသူမလုပ်ခဲ့သောဇာတ်ကောင်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုကိုသူမအားမထိခိုက်စေလိုသောကြောင့် ငါ သူမဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာသူမသိသောကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံငါဒေါသထွက်တတ်သည်။ I Am Caroline Calloway ၏အပိုင်း ၃ တွင်သင်ဖတ်ရှုသွားသောအခါ Natalie နှင့်ကျွန်ုပ်သည်နောက်ဆုံးတွင်ဖုန်းကိုအတူတကွဆက်သွယ်ကြသည်။ သူမအနေဖြင့်ထိုအပိုင်းကိုဒေါသများစွာဖြင့်ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူမတောင်းပန်ခဲ့ဖူးသမျှတွင်အနီးဆုံးဖြစ်သည် ။
သဲသောင်ပြင်ဆောင်းပါးဖော်ပြပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်ကယ်ရိုလိုင်းသည် UTA နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး Los Angeles ရှိရုပ်ရှင်အမှုဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စာစီစာကုံးကိုအခြေခံသည့်ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်တီဗွီဇာတ်လမ်းများသည်လမ်းပေါ်တွင်ရှိ၊ မရှိနှင့်ကာရိုလိုင်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားစွာထွန်းလင်းတောက်ပပါသလောဟုငါမေးသည်။ ဘုရားရေ! ငါက ဒါပေါ့ ဒီအကြောင်းပြောခွင့်မပြုပါကကျွန်ုပ်၏မန်နေဂျာသည်သွေးအေးနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုသတ်လိမ့်မည် ဒါပေါ့ ဒီအထဲတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ငွေအများကြီးကြောင့်ကြီးမား fuck ဆိုတဲ့ခံရဖို့သွား! လာမယ့်လေးနှစ်ကိုကြာတော့မှာဖြစ်ပြီး၊ ငါ့ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေတယ်။ အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်၊ အကျော်ကြားဆုံးသောလူများပါ ၀ င်ပါသည်။
သူမပြောတာကိုသူမကပြောပေမယ့်သူမကိုယ်တိုင်စာအရေးအသားတွင်ပါ ၀ င်မှုရှိ၊ သူမသည်သူမဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။ သူတို့မှာအလွန်စိတ်ကူးယဉ်စာရေးဆရာတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ သူကငါကိန်းဘရစ်မှာငါရိုးသားစွာကိုးကွယ်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိကိုအခြားသူတစ် ဦး ဦး ၏လက်ထဲသို့ထည့်လိုက်ခြင်းသည်အနည်းငယ်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်သော်လည်းအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်၏ဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိကိုရေးသားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ ကိုပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုအခြားသူတစ် ဦး ၏လက်ထဲသို့ထည့်လိုက်ခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသလော။ ၎င်းသည်မှန်ကိုရင်ဆိုင်နေရသောမှန်နှင့်တူသည်၊ သို့သော်အရေးအသားအရဆက်ဆံရေးတွင်ဖြစ်သည်။
ငါ့ဖုန်းကငါကျားကန်ထားတဲ့အထစ်ကိုချွတ်လိုက်တဲ့အခါဓာတ်ပုံထဲမှာအရာအားလုံးငါ့မျက်နှာမှလွဲ။ မှုန်ဝါးထွက်လာသဖြင့်, မတော်တဆ Beauty and the Beast ရုပ်ရှင်ပိုစတာကိုပြန်ဖွင့်။ (Belle ဟာကျွန်မအကြိုက်ဆုံး Disney Princess)
မျှဝေသည် ကယ်ရိုလိုင်း Calloway (@carolinecalloway) ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ Aprပြီ ၂၆ ရက်၊ ည ၁၁း၁၁ နာရီတွင် PDT တွင်
Natalie ကိုမပြောဘဲကယ်ရိုလိုင်းအကြောင်းရေးရန်ခက်ခဲလာသည်နှင့်အမျှအုပ်စုအမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြရန်လည်းမခဲယဉ်းပါ သရဲ ၎င်းသည် Reddit နှင့် Twitter တို့တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော microcosmic world တစ်ခုပင်ဖြစ်သည် Podcast တခုကို !), ကယ်ရိုလိုင်းရဲ့အားနည်းချက်တွေကို, အမှားများကိုဆွေးနွေးရန်နှင့်သူတို့၏အမြင်အနေဖြင့်သူမ၏ယေဘုယျ All- ပတ်ပတ်လည် untenable awful ၏တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ။ သူမကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးလို့ပြောပေမယ့်သူမရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကအခါအားလျော်စွာသူတို့ကိုစစ်ဆေးပါတယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ပြုမူနေသည့်လမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြaနာတစ်ခုရှိပါကကျွန်ုပ်အားစာပို့နိုင်သည်။ ပြီးတော့သူတို့မှာငါ့မှာနံပါတ်မရှိဘူးဆိုရင်ငါ့ရဲ့အပြုအမူကြောင့်သူတို့ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုငါဂရုမစိုက်ဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်၊ antisemitic ကာတွန်းတင်ခြင်း မတော်တဆဖြစ်စေ၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ ရာသီဥတုပျက်စီးခြင်း၊ မုန်းတီးမှုနှင့်အခြားအရာများဆက်လက်ကျူးလွန်နေသည့်အရာအားလုံးအားဖြင့်၎င်းအပြုအမူကိုကျွန်တော်သိလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့လိုပဲပစ္စည်းပစ္စယတွေကငါ့ရဲ့စရိုက်ကိုမကြိုက်ဘူး၊
ငါသူမ trolling နှင့်မျှတသောဝေဖန်မှုကိုဘယ်လိုခွဲခြားသည်ကိုငါမေးသော်၎င်းသည်သူ့အတွက်ခက်ခဲသောအလုပ်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြသည်။ ငါနေ့တိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာသောမှတ်ချက်များ၊ တွစ်တာများ၊ DM မ်ား၊ ကျွန်ုပ်နေ့စဉ်ရရှိသောပုံပြင်များကိုဖြတ်သန်းရန်နှင့်ဤသူများထဲမှမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်ကိုစိတ်ရွှင်လန်းပြီးစိတ်ကောင်းသောစိတ်ရှိသောလူသားများဖြင့်ဖြတ်သန်းရန်ကျွန်ုပ်အချိန်မရှိပါ။ ငါအကြံဥာဏ်ယူသင့်တဲ့သူ၊ ဘယ်သူတွေလဲသူတို့ရဲ့မိခင်မြေအောက်ခန်းမှာသူတို့ရဲ့ဖန်သားပြင်နောက်ကွယ်မှာထိုင်နေတဲ့ငါအရမ်းဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့လူတွေ၊ ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာကိုအကြံမပေးချင်ဘူးလား။ ' သူစိမ်း, မင်းကျပန်း Reddit စာမျက်နှာဖြင့်သေလိမ့်မယ်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်စွာဖြင့်သူမသည်သူမနှင့်ပတ်သက်သော Reddit ချည်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုမေးသည်။ ယခုတွင်ငါသည်ကြင်နာ၏စပ်စုမိပါတယ်။ ငါထင်သကဲ့သို့ကြောက်စရာလား? ငါနို့စို့ဖို့ဘယ်လောက်လွယ်ကူတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်သလောက်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ဖြေတယ်။ ကယ်ရိုလိုင်းအကြောင်း၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အဲဒီမှာဘယ်လောက်အထိစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဆွေးနွေးမှုကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ သူမ၏ဘဝ၏သေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူစွဲလမ်းနေခြင်း (ဟုတ်ကဲ့၊ ဒဏ္.ာရီလက်ဖက်ရည်ဇွန်း နှင့်ဟုတ်ကဲ့, သင်တန်း, ကယ်ရိုလိုင်းလျင်မြန်စွာကအပေါ်စုတ်တံ) ။ ဒါ့အပြင်ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်မသက်မသာတွေ့နေရတယ်၊ ဥပမာ - အဆက်မပြတ်နှင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံနေရသောခန္ဓာကိုယ်အရှက်ကွဲခြင်း၊ တစ်လက်မချင်းတစ်လက်လျှင်တစ်ကြိမ်လျှင်အပေါက်တစ်ခု။ ကယ်ရိုလိုင်းညည်းတွား အခြားအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအဓိပ္ပာယ်ဖြင့်ဖြစ်ပျက်နေသောကောင်းမွန်သောဆွေးနွေးမှုများရှိကြောင်းကြားရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဝမ်းသာပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရှက်ရစေတဲ့အရာတွေကတကယ်ကိုကြမ်းတမ်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့်သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုနာဇီလို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာအိုအိုး၊ ဒါက 'go go ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်' 'မက်ဆေ့ခ်ျတွေအများကြီးနှင့်အတူခက်ခဲတဲ့ရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအရာများသည်မည်မျှမြန်မြန်ရွေ့လျားနေသည်ကိုညွှန်ပြသည့်အနေဖြင့်သူမရည်ညွှန်းသည့်ရက်သတ္တပတ်သည်ဤအင်တာဗျူးမတိုင်မီတစ်ပတ်အလိုတွင်သာဖြစ်သည်။
ငါ Caroline Calloway မှကိုးကားချက်တစ်ခုကြောင့်ကျွန်ုပ်စိတ်ထိခိုက်မိသည်။ Caroline ကအနုပညာသမိုင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အဓိကအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းကိုဖော်ပြသောကြောင့်၎င်းသည်ဘာသာရပ်နှင့်တူသောကြောင့်ဖြစ်သည် ဇာတ်ကောင် ကယ်ရိုလိုင်း Calloway ၏အဓိကပါလိမ့်မယ်။ သို့ဖြစ်လျှင်ကယ်ရိုလိုင်း Calloway နှင့် Caroline Calloway ၏ဇာတ်ကောင်အကြားခြားနားချက်ရှိပါသလား မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ယခုငါမှာအားလုံးထိုသို့စဉ်းစားကြဘူး။ ကျွန်တော် ... ကိုလုပ်နေကျပါ။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုဖြစ်ပျက်လာသည်နှင့်အမျှပိုမိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်၏ဘဝအကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချရန်ပိုမိုစဉ်းစားမိသည်။ အကြောင်းတစ်ခုခုရေးရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ အစဉ်အမြဲငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘဝလေ့လာသူအဖြစ်တွေ့ရပြီးစာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကိုနိဂုံးချုပ်စေမည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်စုများယူခဲ့သည်။
ဒီတော့ဒါကိုရှင်းလိုက်မယ်။ Natalie က Natalie အကြောင်းတကယ်ပါတဲ့ Caroline အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့တယ်။ Caroline အကြောင်း Natalie အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့တယ်။ ဒီဂျာနယ်လစ်တွေအားလုံးက Caroline အကြောင်းဆောင်းပါးတွေကိုရေးနေတာ၊ အကြောင်းရင်းတချို့ကြောင့်အခုတော့ ငါက ကယ်ရိုလိုင်းအကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခြင်း နှင့် နာတယ်လီ နှင့် ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂျာနယ်လစ်များနှင့် wow ငါခေါင်းကိုက်လာပြီ!
မျှဝေသည် ကယ်ရိုလိုင်း Calloway (@carolinecalloway) ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ Aprပြီ ၂၈ ရက်၊ ညနေ ၁း၃၁ တွင် PDT တွင်
အင်တာဗျူးပြီးသွားရင်တောင်မှကယ်ရိုလိုင်း Calloway သည်မည်သူဖြစ်သည်ကိုသိရန်ခက်ခဲသော်လည်းမဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သူမဆိုသိရန်ခက်ခဲသည်၊ မဖြစ်နိုင်လျှင်မဟုတ်သည့်နည်းတူဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းဒဏ္journalistsာရီပုံပြင်များအရစာနယ်ဇင်းသမားများနှင့်စက္ကာသမားများကကယ်ရိုလိုင်းကိုသူမတောင့်တသည့်အရာအားအမှတ်မထင်ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
Caroline လောကသို့ပိုမိုဆွဲဆောင်ခံရသည်နှင့်အမျှ၎င်း၏အနုပညာလက်ရာမြောက်လှသည့်အနုပညာဝါသနာအိုး၏တီထွင်ကြံဆမှုများကမရေရာမှု၊ ရှုပ်ထွေးမှုမရှိသောပုံပြင်ဖြစ်လာသည့်တွစ်တာချည်ထည်နှင့်ဆိုးဆိုးရွားရွားဖွဲ့စည်းထားသောအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများဖြစ်သည်။ အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည့်မိသားစုနှင့်စိတ်ရောဂါအကြောင်း၊ အလွန်အမင်းအွန်လိုင်းဖြစ်ခြင်း၏အန္တရာယ်များပုံဥပမာတစ်ခု၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာပြိုလဲပျက်စီးခြင်း၊ ပြည်သူ့ဘဝနှင့် ၀ ီစတဲလ်သည်အဘယ်ကြောင့်သင်မသိရှိဘဲသင့်ကိုစုပ်ယူသည်။
Ring Pops နှင့်တစ်ခါသုံးသင်တုန်းကဲ့သို့များသောအားဖြင့်အမှတ်တရများသည်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူပိုဆိုးလာသည်။ ဒါဟာသိပ္ပံပါပဲ။ Northwestern University မှလေ့လာမှုတစ်ခုအရကျွန်ုပ်တို့သည်မှတ်ဥာဏ်ကိုအသုံးပြုသောအခါတိုင်း၎င်းနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်များနှင့်အတိတ်ကိုတည်းဖြတ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်ပါကဤသို့ပြောရန် - ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးအမှတ်တရများကိုထိန်းသိမ်းရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ၎င်းတို့ကိုမေ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တခါတရံကင်းဘရစ်၌ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးရက်သတ္တပတ်များအကြိမ်ကြိမ်ပြန်လည်လည်ပတ်မိသည်ကိုတခါတရံကျွန်ုပ်တကယ့်အဖြစ်အပျက်သည်တိကျမှန်ကန်စွာပြောရန်အလွန်အမင်းပျက်စီးလွန်း။ ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိလာသောအခါကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည့်ကြယ်ပွင့်ရိုက်ခတ်မှု၊ ဥပမာ၊ အော်စကာနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ချိန်းတွေ့ခြင်းအဆုံးသတ်တော့မည်ကိုယခုသိပြီ။ Valentine's Day ကိုပဲရစ်မြို့မှာကျင်းပပြီး၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာရဲတိုက်များနှင့်မင်းဘဝ၏မရေမတွက်နိုင်သောနာရီများကလက်တော့ပ်များတွင်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်နေကြသည်။ ကင်းဘရစ်သည်အမြဲတမ်းလှပသော၊ နောက်ဆုံး၌ငါ 3:00 AM (ဥယျာဉ်များ) တွင် falafel ကိုမည်သည့်နေရာတွင် ၀ ယ်ရမည်နည်းအားဖြင့်လမ်းအမည်များကိုကောလိပ်အမည်များကိုလေ့လာပါမည်။ မန်ဟက်တန်၌မမျှော်လင့်ဘဲများသောအားဖြင့်မကျေနပ်သောညစာစားပွဲများပြီးနောက်ငါနှင့်ဂျော့ရှ်နှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ရလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်က - နှင့်တစ်ကြိမ်သာ - Josh သည်အော်စကာအမည်ကိုမှားယွင်းစွာပြောလိမ့်မည်။ ဂျော့ခ်ျ, ငါသူ့ကိုအလျင်အမြန်ပြင်ပေးပါလိမ့်မယ် တော်ဝင်ကလေး၏အမည်မှာဂျော့ခ်ျဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤဓာတ်ပုံဖြစ်ပျက်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်လာမည့်အရာကိုစိတ်ကူး။ မရနိုင်ပါ။ တကယ်တော့အခုဒီအချိန်မှာငါဒီဓာတ်ပုံဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ကူးကြည့်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောအပတ်ကကင်းဘရစ်ခ်ျသည်အစနှင့်အဘယ်သို့သောသူငယ်ချင်းများစွာကိုမေးမြန်းခဲ့သည် (လုယူသူသတိပေးချက် - ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေဖြစ်လာသည်) သူတို့အားလုံးကလေပြင်းမုန်တိုင်းဟုဆိုကြသည်။ သူတို့က Bambi ကဲ့သို့အရိုအသေကိုးကား။ ထိုအသေချာငါကရ။ ဒါပေမဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါပြုံးပြုံးလေးပဲ။ ကျွန်တော့်ဂျာကင်အင်္ကျီဘယ်မှာလဲ။ ငါကဘောင်ထဲကပစ်ချပေမယ့်ရှမ်ပိန်စောင့်ရှောက်ခဲ့သလား အဘယ်ကြောင့်ငါအကွာအဝေးသို့ပယ်ကြည့်မျှော်နေပါတယ်? ငါဒီဓာတ်ပုံယူဖို့သေချာပေါက်တောင်းဆိုခဲ့တယ် ငါပြောဖို့ကြိုးစားနေတာကအထီးကျန်ခြင်းနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပြေးလွှားနိုင်မှာပါ။ ကင်းဘရစ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးသီတင်းပတ်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်နောက်ဆုံးတွင်ပျော်ရွှင်မှုကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းဤပုံသည်ထူးခြားသည့်အချိန်မဟုတ်ပေ။ ပေါ်တာအတိတ်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်တကယ်တော့အဲဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ထိုနေ့လည်ခင်းတွင်အော်စကာနှင့်စကားစမြည်ပြောကြသည်။ အမှုအရာအစစ်အမှန်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသူတို့ကသာလွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန် -er ရလိမ့်မယ်။ ဆက်လက်ခံရဖို့ ... #adventuregrams
မျှဝေသည် ကယ်ရိုလိုင်း Calloway (@carolinecalloway) ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်ညနေ ၅း၀၀ နာရီ PST တွင်
ဤလှိုင်းထနေသောပင်လယ်၌ကြမ်းပြင်တစ်ခုရှိသလော၊ ဤအရာအားလုံးသည်၎င်းကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ခံစားရမည်ဟုထင်မြင်သဖြင့်ဤအရာအားလုံးသည်အဆုံးစွန်သောနောက်ဆုံးကစားနည်း (သို့) အဖြေမှန်တစ်ခုဆီသို့ ဦး တည်သွားသလော။ အဘယ်သူမျှမ, သင်တန်းမဟုတ်ပါ, မည်သည့်ဘဝထက်မပိုအဖြေတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြိုတင်စီစဉ်ထားအကျပ်အတည်း, အထွတ်အထိပ်နှင့် resolution ကိုအတူရိုးရှင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းရှိပါတယ်။ ကယ်ရိုလိုင်းသည်လူခပ်သိမ်းတွင်လူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူမနှင့်သူမအတွက်အခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအားလုံးသည်၎င်းတို့အနက်မှအဓိပ္ပာယ်အချို့ကိုရှာရန်ကြိုးစားသကဲ့သို့သူသည်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်ရှုပ်ထွေးပြီးမရေမတွက်နိုင်သောကာလများနေထိုင်သည်။ အရာနောက်ဆုံးမှာအရာတို့ကိုကြည့်ဖို့ချို့ယွင်းချက်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်ရိုလိုင်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ လူတစ် ဦး စီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တွင်ချထားလျှင်သူတို့၏အားနည်းချက်များ၊ မလုံခြုံမှုများနှင့်အတွေးများကိုသိမ်းဆည်းထားလျှင်လူတိုင်းသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းလိမ့်မည်။ထောင်ပေါင်းများစွာသောသူကကော်ဖီသောက်ရင်းသူတို့မကျေမနပ်ဖြစ်နေဖို့အတွက်သူမရှုပ်နေအောင်စောင့်နေတယ်။
အထူးသဖြင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ပျင်းစရာကောင်းသည့်အိမ်များကိုပိတ်ထားလိုက်သောအခါ၊ သက်သတ်လွတ်စားခြင်းဖြင့်ပျက်ကွက်သောအခြားသူတစ် ဦး ၏ဘဝ၏သေးငယ်သော်လည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အငြင်းပွားမှုများတွင်ပျော်မွေ့ရန်မှာပျော်စရာပင်! Post-irony မထင်မှတ်သောတွစ်တာရှိနေခြင်း! မေးခွန်းထုတ်စရာလက်ဖက်ရည်သောက်သည့်လုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများ! ယေးလ်ပြားများ ကံမကောင်းစွာပဲ! လေ့ကျင့်ခန်း၏အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့သောအချက်ဖြစ်လာသည်, ကမ္ဘာကြီးကိုမူးယစ်လှည့်လည်အဖြစ်အာရုံပင်။
အထူးပုံရိပ် Wikimedia Commons Creative Commons လိုင်စင်